News - Jilin Yuantong Mining Co., Ltd. wuxuu kaqeyb galay Shirka 2020 Shiinaha Warshadaha Macdanta aan-macdan lahayn
Jilin Yuantong Mining Co., Ltd. wuxuu kaqeyb galay shirkii shiine warshadaha macdanta aan macdan lahayn ee 2020
Shirka "2020 China Non-Metallic Mineral Mineral Conference and Exhibition Expo" oo ay soo qabanqaabiyeen Ururka Warshadaha Macdanta ee aan macdanta lahayn ayaa si weyn loogu qabtay magaalada Zhengzhou, Henan intii u dhaxeysay 11-kii ilaa 12-kii Noofembar. Casuumaad ay ka heleen Ururka Warshadaha Macdanta ee aan Birta ahayn, ku-xigeenka maareeyaha guud ee shirkaddayada Zhang Xiangting iyo maareeyaha gobolka Ma Xiaojie ayaa ka soo qaybgalay shirkan. Shirkan waxaa la qabtay daqiiqad muhiim u ah la dagaalanka qaranka ee ka hortagga cudurka faafa ee cusub. Iyada oo hal ku dhigeedu yahay "abuurista qaabab ganacsi oo cusub iyo in lagu daro labada wareeg", shirku wuxuu soo koobay khibrada iyo guulaha laga gaadhay dalkeena ee soo saarista macdanta aan-macdan lahayn iyo guulaha laga gaadhay, waxaana looga hadlay mustaqbalka dalkayga mustaqbalka warshadaha aan macdan lahayn ee Istaraatiijiyada iyo dejinta, iyo sidoo guulaha laga gaarayo is burinta ugu weyn iyo dhibaatooyinka taagan ee warshadaha. Gaar ahaan, xaaladda hadda jirta iyo isbeddelka horumarka ee warshadda aan macdanta ahayn ee macdanta ku jirta ee faafa, oo ay weheliso xaaladda dhaqaale ee dalkayga tan iyo markii uu faafay, waxaa lagu sameeyay cilmi baaris qoto dheer iyo dood, waxaana la soo jeediyay in lagu guuleysto "ka hortagga iyo xakamaynta dagaalka "oo aad wax ku biiriso cusub iyo ka sii weynba si loo xaqiijiyo himilooyinka istiraatiijiyadeed ee qaran.
Madaxda Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyada Teknolojiyada, Wasaaradda Kheyraadka Dabiiciga ah, Maamulka Gobolka ee Canshuuraha iyo Xiriirka Qalabka Dhismaha ee Shiinaha ayaa si isku mid ah u jeediyay khudbado muhiim ah. Kulankan, ayaa waxaa khudbado iyo hadalo isdhaafsi ah kajeediyey madasha 18 cutub oo ka kala socday qaybaha la xiriira dalka Marka loo eego qabanqaabada kulanka, Zhang Xiangting, oo ah ku-xigeenka maareeyaha guud ee shirkadeena, wuxuu sameeyay warbixin cinwaankeedu yahay "Horumarinta alaabada cusub ee diatomite iyo horumarka arjiga ee dhinacyada la xiriira" isagoo metelaya shirkadeena, wuxuuna soo bandhigay fikrado cusub iyo habab cusub oo shirkadeena ah. berrinkan. Aqoonsiga faa'iidooyinka warshadaha ee shirkadeena iyo booska wanaagsan ee qoto dheer ee diatomite, waxaa si aad ah u amaanay martida.
Shirka ayaa sidoo kale lagu shaaciyey guuleystayaasha "Sanadka 2020 Shiinaha abaalmarinta cilmiga macdanta iyo tiknoolajiyada aan macdanta ahayn" oo la gudoonsiiyey.
Shirka waxaa gudoominayay Pan Donghui, Madaxweynaha Ururka Shiinaha ee aan macdanta ahayn. Xubno matalayay xubno ka socda warshadaha la xiriira macdanta aan macdanta ahayn sida Jaamacadda Shiinaha ee Macdanta iyo Teknolojiyada, Akadeemiyada Shiinaha ee Cilmiga Juquraafiga, iyo marti ka socota machadyada cilmi-baarista sayniska ayaa ka soo qaybgalay shirka.
Waqtiga dhejinta: Jul-08-2020